Islaamka iyo xorriyadda qofka – Kaasho Maanka
Nolosha qofka waxyaabaha qiimaha u yeela qayb waynna ka qaata jiritaankeeda waxaa ka mid ah gobannimada qofeed ama madaxbannaanida shakhsiga ah oo haddii la waayo aanu qofkaasi ahaanayn wax jira. Qofkasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka xoroobo wax kasta oo dabraya wuxuuna xaq u leeyahay inuu sameeyo wuxuu rabo waxaaso aan dadka kale dhib u geysaneyn.
Gobannimada qof ahaaneed waa xaq qofku leeyahay oo aan sifo sharciya mooyee si kale looga qaadi karin. Qofkasti wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado nolol ay sees u tahay gobannimo buuxda oo dhan walba ah.
Marka aan eegno diinta Islaamka waxaa kuu soo baxaysa inay gebi ahaanba ku tumatay xuquuqdaha shakhsiga leeyahay, qolyaha Muslimiinta ahi waxay la yimaadeen gumaysi diimaysan oo ay u bixiyeen xuduudaha xorriyadda ujeedkuna yahay in la helo waddo loo maro faro-gelinta nolosha dadka. Waxay diiddan yihiin oo qiima tireen xorriyadii shakhsiga ahayd ee qofka waxayna awoodsiin u sameeyeen cid walba oo diintooda haysata inay xaq u leedahay faragelinta nolosha dadka kale iyagoo qiil ka dhiganaya xadiiska odhanaya (Qofkii xumaan arkaa gacantiisa ha ku bedelo -من راى منكم منكرا فليغيره) iyo odhaada kale (Faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
Xadiiskaasi wuxuu gebi ahaanba meesha ka saaray sugnaanti iyo dhowrsanaantii xorriyada shakhsiga. Qof aan ku aqoon ayaa ku imanaya isaga oo wax ka sheegaya qaabka aad u lebisatey, timaha u jaratay ama aad u soconaysa uu khalad yahay. Qofka Muslimka isagoo maqiiqan ayuu kusoo geleyaa wuxuu ku leeyahay midigta ku cun, shaarubaha iska jar, surwaalka gaabi. Haddii aad waydiiso sababtana waxa uu kuu sheegayaa inay “Munkar” tahay oo ayna diintu ogolayn.
Wuxuu ku odhanayaa Xijaabka gabadhu inay xidhato waa xoriyaddeeda shakhsiga hadday iska tuurto se waa in la garaacaa. Hadalkan micnihiisu waxaa weeye Xijaabka inaad xidhato xor baad u tahay laakin inaad iska dhaafto xidhashadiisa xor uma tihid oo dareenka muslimiintaad dhibaysa, cajiib.!!!
Lebiskayga, muuqayga, qaabka aan timaha u jarto iyo gacanta aan wax ku cuno ama ku cabbo iyo cidda aan raaco ama meesha aan maraa maaha wax aan cid ku dhibi karo mana aha wax aan cid fasax uga qaadanayo ama wax ka waydiinayo. Aragti aan qabo ama waxa aan aaminsanahay inaan sheego iyadana waa arrin aan xor u ahay.
Diinta islaamka waxay ku tumatay oo meesha ka saaraty waxkasta oo ereyga gobannimo xidhiidh la leh, waxyna ku bedeshey xeer la mida xeerarka ay adeegsadaan dawladaha faashiistaha ahi oo dhigaya in xorriyada shakhsiga ahi ku dabran tahay waxa dawladdu ama wadaadka meeshaa joogaa jecel yihiin. Xeer kasta oo la isku dayo adoo aan rabin ama raali ka ahayn waxna aan lagaa waaydiin in lagugu dhaqo ama lagugu nidaamiyo qaab san-dullayn ah lebiskaaga, fikirkaaga iyo hab-dhaqankaaga waa xeer iyo nidaam gumaysi waajibna ay tahay inaad diido oo aad iska tuurto heeryadiisa.
Haddii ay ku dhibayso qaabka dadku u dhaqmaan waxay cunaan qaabkay u lebistaan aragtiyaha ay ka doodaan ama ay soo bandhigaan gurigaaga joog oo haksoo bixin. Hadii aad gadhka lala baxo, dirac carbeedka iyo cadayga jeebka lagu rito wanaag u taqaan dad bay agtooda ceeb ka tahay.
Ha uga tanaasulin xorriyadaada qof ahaaneed qof kula mid ah. Inaad cibaado badan tahay ama masaajidka waqti badan dhex fadhido ama aad muuq carbeed leedahay micneheedu maaha inaad xaq u yeelatay inaad noloshayda soo faro geliso.
Si aan ugu noolaano nolol heerkeedu sarreeyo waa inaan ka kornaa ku mashquulka nolosha dadka kale ee aanay jirin wax innaga galay waxbana aynaan ka bedeli karin. Hadiise ay dhacdo adigu inaad ka tanaasushey xorriyadaadii iyo gobanimadaadii qof ahaaneed taa micneheedu maaha inaad farageliso oo ku mashquusho nolosha dadka kale ee jecel xorriyadooda qof ahaaneed. Waxa aad xumaan u taqaano adigu ha samayn oo ka fogow balse dadka kale xaq uma lehid inaad ku khasabtid inayna samayn.
Si aan u kala nabad galno qof waliba danihiisa gaarka ah ha ku mashquulo dadka iyo noloshoodana ha u nabad geliyo.
W/Q: Khaled Hassan 4th September 2018